Imiyalo ye-antibiotic "Josamycin" yokusetshenziswa ibhekisela eqenjini lama-macrolide. Isidakamizwa sinomthelela we-bacteriostatic, ehambisana nokuvimbela amaprotheni ama-bacterium. Ukugxila okuphezulu endaweni ye-inflammation kunikeza umphumela we-bactericidal.
Isidakamizwa sisebenza ngokumelene nezinambuzane ezincane ze-intracellular, ama-Gram-positive ne-Gram-negative bacteria (aerobic).
I-agent "Dzhozamitsin" ngemuva kokungenelela emgodleni wokugaya ifakwe ngokushesha. Ukuhlushwa okukhulu kwesidakamizwa kufinyelela ngemva kwehora elilodwa noma amabili.
Le mithi ibonakala ngokusabalalisa okufanelana kuzo zonke izinhlelo nezinhlaka. Lesi sidakamizwa sihlanganisa izicubu ze-pulmonary, i-lymphatic (ezinamathoni we- palatine), ezingxenyeni zesimiso sokuvimba, izicubu ezithambile nesikhumba. Kukhona ukugxila okuphezulu kakhulu emanzini okushisa, ukujula, amathe, amathoni, amaphaphu.
Ukuzikhethela okuvela emzimbeni kwenziwa ikakhulukazi ne-bile, cishe amaphesenti angamashumi amabili adonswa emcinini.
Umuthi othi "i-Jozamycin" yokusetshenziswa ukhuthaza ukwelashwa kwezifo ze-etiology ezithathelwanayo (imvelo) ezibangelwa ama-microbes ezibucayi. Izifo ezinjalo zihlanganisa izifo ezingxenyeni ezingenhla nezingezansi zesimiso sokuphefumula kanye nezitho ze-ENT: i-pneumonia (kufaka phakathi ifomu le-atypical), i-bronchopneumonia, umfutho obomvu (phambi kwe-hypersensitivity penicillin), i-diphtheria (ehlangene ne-antitoxin), i-laryngitis, i-otitis media , I-Sinusitis, i-paratonzillitis, i-tonsillitis, i-pharyngitis nabanye. Imiyalo yezokwelapha "Dzhozamitsin" yokusetshenziswa futhi iphakamisa izifo zesikhumba kanye nezicubu ezithambile: i-lymphadenitis, i-lymphangitis, i-acne, i-erysipelas (enobukhulu obuningi be-penicillin), i-anthrax, i-furuncles, i-pyoderma nabanye. Izinkomba zifaka izifo ze-periodontal kanye ne-gingivitis, kanye nezinye izifo zomlomo womlomo. Isidakamizwa esithi "i-Jozamycin" sinqunywe ukutheleleka kwamagciwane kanye nezitho zangasese: i- venereal lymphogranuloma, i- syphilis (nge-hypersensitivity penicillin), i-gonorrhea, i-prostatitis, i-urethritis, kanye ne-mycoplasmal, i-chlamydial kanye nezifo ezixutshwe.
Iziguli ezinezinyanga eziyishumi nane zemithi zinconywa ukuba zithathe isilinganiso se-1-2 amagremu ngamanani amabili noma amathathu. Izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-14 zinqunywe ama-milligram ama-kilogremu angama-30 kuya kwangu-50, zihlukaniswe ngamanani amathathu. Ubude besicelo kunqunywa ochwepheshe.
Ukuthatha izidakamizwa kungadala imiphumela eminingi engathandeki. Emiphumeleni emibi engavamile yesidakamizwa esithi "Josamycin" imfundo yokusetshenziswa ihlanganisa i-jaundice, ukuphazamiseka ekuphumeni kwe-bile, ukunyuka kwemisebenzi ye-enzyme yesibindi, imifantu, ukuphazamiseka kwezimpendulo Isidakamizwa singabangela ukubola kwe-colitis, isifo sohudo, ukuhlanza, ukushaya inhliziyo, isisindo sokunambitheka, ukunxusa ukudla.
Isidakamizwa asinqunyelwe ukucindezeleka ku-erythromycin nezinye izidakamizwa ezivela eqenjini lama-macrolide. Ku-contraindications kumuthi othi "Dzozamitsin" imfundo ibhekisela ekuphukeni komsebenzi wesibindi esigabeni esinzima.
Udokotela unquma ukuthi kufanele ukuthatha imithi ngesikhathi sokukhulelwa nokukhulelwa.
Ekusetshenzisweni okufanayo ngesikhathi sokubeletha kwe-hormonal kanye namalungiselelo eqembu lama-macrolides Kunconywa ukuthi usebenzise izisu zokuvimbela ezengeziwe (hhayi ama-hormonal).
Uma ukhethwa kwezinsana, ukuqapha okuhlelekile kokusebenza kwesibindi kuyadingeka. Izingane ezisengaphambili ziphikisana.
Ngokuthuthukiswa kwe- colitis engapheliyo, ikhambi kufanele liqedwe, kuyilapho libeka ukwelashwa okudingekayo.
Naphezu kweqiniso lokuthi izidakamizwa "uJosamycin" zibuke kakhulu, ngaphambi kokuthatha isidingo sokubonisana nodokotela.
"IZENZO": izibuyekezo mayelana nomuthi
Ukuhlonipha: imiyalelo yokusetshenziswa
Lapho eza ngenyanga ngemuva kokubeletha?
Siyakuhalalisela Mashi 8, umama
"Metrodent" (gel): yokusetshenziswa, analogs. ijeli zamazinyo
Indlela baphuze uwoyela linseed. Yefilakisi uwoyela imbewu: isicelo